काँग्रेसी हो हिम्मत गर, चिच्याएर भन “अब कांग्रेसमा ………. ” - radionrn.com
दीपक सापकोटा :- काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला बेला बेलामा भईरहेको सुन्दै छु । उनीहरुको भेला पार्टीको गत महासमिति बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधिहरुको भावनालाई आफैले पार्सल गरि सभापति मर्फत् केन्द्रिय समितिमा पठाएको नाशोको वेवास्ता गरि शेरबहादुरहरुले नै केन्द्रिय समिति बैठक मर्फत लिएको फरक निर्णयलाई उल्टाउन दवाव दिने उद्देश्यले हो रे भन्ने सुन्दै छु । बिषय केन्द्रिय नेता महाधिवेशनमा आउँदा गाउँबाट चुनिएर आउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने हो । तपाइँलाई कस्तो लाग्छ ? अर्को फेरि सुन्दै छु, शेरबहादुर र रामचन्द्रको भागबन्डा मिल्यो, भागबण्डाको लिस्ट केन्द्रिय सदस्यहरूलाई बैठकमा सुनाउइने छ, यस्तै यस्तै सुन्दैछु ।
ब्यक्तिगत कुरा गर्यो, पटक्कै नभन्नु होला । जीवनको डेढ दशक (०५० देखि ०६५) जुन मेरा लागि अत्यन्तै उर्जाशिल उमेर थियो, काङ्ग्रेस मै समर्पित गरेको छु । अरुहरुले जस्तै धेरै थोरै पसिना मैले पनि यो पार्टीमा सिन्चेको छु, यस्तो योगदान कांग्रेसमा थुप्रैको छ मेरो मात्रै पनि हैन । तर पनि काँग्रेस भएकै नाउँमा ब्यक्तिगत केही लिएको छैन र कहिल्यै लिन पनि नपरोस्, सके सानै होस् नै सहि योगदान गर्न सकियोस् जस्तो लाग्छ ।
मैले काङ्ग्रेसको आलोचना गर्दा कतिपयलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, नबुझोस् । यसमा पटक्कै गुनासो पनि रहेन । तर पार्टी नेतृत्वले गरेका हरेक गल्तीलाई पनि कांग्रेसीहरुले यसरी नै ओठ ढाक्दै जाने, थपडी मार्दै जाने, साक्षी बस्दै जाने र नबोल्ने हो भने यो काँग्रेस कालन्तरमा शेरबहादुर र रामचन्द्रको खल्तीमा मात्र भेटिन्छ । ठुलो कुरा मैले पटकै गरेको हैन । वास्तवमा हिजो केहिलाई लाग्थ्यो, काँग्रेसमा कोइरालाले शेरबहादुरहरुलाई अन्याय गरे, मुन्टो उठाउन पनि दिएनन् । शेरबहादुरले अवसर पाए केही गर्थे कि त पनि भन्ने थियो । ठिकै पनि हो । तर खासै त्यस्तो भएन । सक्किगो । अब आश पनि छैन ।
यता रामचन्द्रको कुरा गरौं, मैले चान्स पाइन भनेर सधैं गुनासो हुने गर्छ। स्वभाविक पनि हो सरसर्ती हेर्दा। तर यसो पार्टीभित्रको प्रतिपक्षका रुपमा उनको भुमिकालाई हेर्यो भने पत्याइ हाल्ने ठाँउ देखिन्न। गाँठी कुरो शेरबहादुर र रामचन्द्रहरु कहिल्यै महत्वपुर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा टाइमली स्पष्ट हुन नै सकेनन्। निर्णयहरु प्रायः विवेकशून्य नै रहे।
पार्टीका आम शुभेच्छुक सदस्यहरुको मर्म र भावना विपरित गएर गरिएका थुप्रै निर्णयहरु (जस्तो लोकमान सिंह कार्की काण्ड, प्रन्या सुशीला कार्की महाअभियोग काण्ड, तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती सन्दर्भ, भारतको नाकावन्दीलाई नाकावन्दी हो भनेर जनतामा जान नसक्नु, प्रधानमन्त्री पदसंग साटिएको सिङै भरतपुर महानगरपालिकको मेयर पद र यसले गिराएको निष्ठावान चितवन काँग्रेसीहरुको मनोवल, यी र यस्ता थुप्रै बिबादास्पद निर्णयहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् भन्ने लाग्छ।
पार्टी भित्र र बाहिर लिने निर्णयहरुमा पनि इमान्दर, बिधिसम्मत र पारदर्शीता पटक्कै देखिएन भन्ने आरोप शेरबहादुर र रामचन्द्रहरुमा लाग्ने गर्छ। यी दुई मिले पार्टी मिल्यो, यी दुई मिलेनन् कांग्रेसी पनि मिलेनन्। आखिर यो कहिले सम्म? सधैं यस्तै हो कांग्रेस ? प्रश्न मेरो ने.का. महासमिति सदस्यहरु र प्रतिनिधीहरुलाई ? ०७४ को आमनिर्वाचन मर्फत जनताले शेरबहादुर र रामचन्द्रहरुसँग त आफ्नो असहमति राखिसके र सुध्रन भने । तपाईहरु चाहि के गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रश्न सामान्य छ । तपाईहरुले बोल्नु पर्दैन?
वी पी पुत्र शशांकलाई हेर्यो, कुशल बिशेषज्ञ चिकित्सक हुन्। सम्मान छ। राजनितिमा कठै जस्तो लाग्छ, माफ गर्नुहोला। महासमिति जस्तो महत्वपुर्ण फोरममा चुइक्क नबोल्ने, आफ्नो लिखित दस्तावेजमा अक्षर पनि नलेख्ने, अनि पब्लिक कन्जुम्सनको लागि बाहिर आएर संघीयता, गणतन्त्र र हिन्दुराज्य चाहिने कि नचाहिने भन्ने बिषयमा वाहियात कुरा गर्न मिल्छ? यो राजनितिक शैलीले कार्यकर्ताहरुमा अन्योल मात्रै सिर्जना गरेन ? आफ्नै पुर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको बृहद शान्ति सम्झौताको खिलापमा हैन यो ? यो सम्झौताको पनि आफ्नै कमजोरी होलान् पार्टीमा छलफल गरे भो, त्यसमा पनि केही रहेन। तर सत्य यो चाहिँ हो कि उक्त सम्झौतापछि धेरै गाउँका जनताले लामो शान्तिको स्वास भने फेरेका थिए ।
मनमा अमनचयन आको थियो । यति सम्मपनि जिम्मेवारीको हेक्का नराख्ने ? यिनको पनि असली पाइन देखियो। बी पी पुत्र हुन्, केही छ कि जस्तो लाग्थो। त्यो पनि अब रहेन। उमेरले हैन सोच र जांगरले उर्जा भएको परिपक्व युवा नेतृत्व चाहिएको छ अब कांग्रेसलाई। भोलि गरेनन् यिनले भने फेरि भनौला, भन्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ । अहिलेलाई त्यसैले ठुलो स्वर गरेर काँग्रेसी हो हिम्मत गर र भन, नसुने चिच्यएर भन, नपुगे हस्तछेप गरेर भन “अब साच्चै कांग्रेसमा गगन, विश्व र चन्द्र भण्डारीहरुको नेतृत्व हेर्न मन छ” ।
(विल्फ्रेड लरिए युनिभर्सिटी क्यानडा)